Bollywood/Hollywood Archives ⋆ Page3of 29 ⋆ Filmy Pati
युएईमा लघु चलचित्र ‘बटुक लाल’को छायांकन सम्पन्न
‘प्रेमगीत ३’ मा समृद्धीको इन्ट्री, बन्नेछिन् बाल्यावस्थाकी गीत
सलमान उर्फ ‘टाइगर’ छुटे जेलबाट, तर कसरी ??
बलिउड अभिनेता सलमान खान उर्फ 'टाइगर' कालो हरिण शिकारको आरोपमा ५ वर्षको जेल सजाय तोकिए पनि रिहा भएका छन् । ५० हजार भारु तिरेर सलमान जमानतमा रिहा भएका हुन् । जोधपुर सेशन कोर्टले सलमानलाई ३.१५…
१५० करोडको महँगो फिल्ममा ‘बागी २’की अभिनेत्री दिशा पटानी अनुबन्धित
चर्चित बलिउड अभिनेत्री, फिल्म ‘बागी २’की अभिनेत्री दिशा पटानीलाई एकपछि अर्को सफलता मिलेको छ। १५० करोड भारूको महँगो बजेटमा निर्माण हुन लागिरहेको दक्षिण भारतिय फिल्ममा अनुबन्धित भएकी छन्।
हरिण मारेको अभियोगमा सलमानलाई ५ बर्ष जेल सजाय
चर्चित अभिनेता सलमान खानलाई सन् १९९८ मा दुर्लभ जनावर दुई कालो हिरणको सिकार गरेको सम्बन्धी भारतको जोधपुर अदालतले मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्षको सजाय सुनाएको हो । करिब २० बर्ष अगाडी कालो हरिण मारेको…
सय करोड टेक्यो ‘बागी २’ ले
सस्पेन्स, थ्रिलर र एक्सनले भरिएको अभिनेता टाइगर श्राफको चलचित्र ‘बागी २’ले बलिउड बक्सअफिसमा धूम मच्चाइरहेको छ । प्रदर्शनको छैटौँ दिनमा सय करोड क्लबमा इन्ट्री भएको छ ।
चलचित्र ‘पद्मावत’ युट्युबमा(भिडियो)
बलिउडको चर्चित फिल्म पद्वमात युट्युबमा लिक भएको छ । दीपिका पादुकोण, रणभीर सिंह र शाहिद कपुरको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म भारतीय प्राचिन कथामा आधारित सत्य घटना हो ।
‘आशि‍की ३’ मा आलियाको जोडी सिद्धार्थ नभई वरुण
बलिउडको रोमान्टिक फिल्म ‘आशि‍की ३’ को तयारीमा मेकर्स जुटेका छन् । फिल्ममा यसअघि आलिया भट्ट र सिद्धार्थ मल्होत्रालाई साइन गरिएको खबर बाहिर आए पनि आलिया भट्टसँग सिद्धार्थ नभई वरुण धवनले साइन गरेका छन । आलिया…
‘बागी २’ को दुईदिनको कमाई ४७ करोड
निर्देशक अहमद खानद्वारा निर्देशित चलचित्र ‘बागी २’ एक्टर टाइगर श्राफ र एक्ट्रेस दिशा पटानी अभिनित चलचित्र शुक्रवारबाट रिलिज भएको थियो । रिलिज भएसँगै फिल्मले बक्सअफिसमा आक्रामक कलेक्सन गर्न सुरु गरेको छ ।
‘नानू की जानू’को ट्रेलर लन्चमा देखिएको भुत (भिडियो)
बलिउड हिरो अभय देओलको हरर फिल्म ‘नानू की जानू’ को ट्रेलर लञ्च भएको छ । चलचित्र आगामी २० अप्रिलमा रिलिज हुने भएको छ । देहोल ट्रेलर कार्यक्रममा गएका बेलामा कारमै हरर दृश्य देखाइएको छ ।…
‘बाहुबली’ले बक्सअफिसमा गरेको कमाई कति?
बलिउड निर्देशक एस.एस. राजमौलीको चलचित्र ‘बाहुबली २; द कन्क्लुजन’ र ‘बाहुबलीः द बिगिनिंग’ले बक्स अफिसमा कमाईको रेकर्ड नै उच्च बनाएको छ । यो फिल्मको दुवै पार्टको कुरा गर्ने हो भने दुवैले बक्सअफिसमा २३ सय करोडको…
गणितमा कमजोर ऋतिक रोशन गणितकै शिक्षक
दिन प्रतिदिनको बलिउडमा चलचित्र निर्माण हुने कार्य तिव्र गतिमा बढिरहेको छ । छायांकनरत फिल्म 'सुपर–३०' सँग जोडेर बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशनको चर्चा बढिरहेको छ । उक्त फिल्ममा ऋतिकले गणितज्ञ आनन्द कुमारको भूमिका निभाएका छन् ।…
कार्तिक २९ लाई प्रदर्शन मिती तय गर्दै ‘माछा माछा’ को फर्स्टलुक सार्वजनिक